OROMOO KARRAYYUU KEESSAA WAA AS NUTTI BA’E!!! – Welcome to bilisummaa
LAMMEESSAA GACHIISAA LATAA jedhama. Kitaabni kun harka bubbulee ture. Har\_a garuu aadaa sabichaan kan bukeeffame,,,,dubbisanis kan hinquufamne….’ASOOSAMA SEENAA…” tokko utuu jireenya barsiisummaarra jiruu…waan naannoosaatti taajjabuufi qeequ mara barruu fuula 150 qabduun hoo’aa nuun jedhe. Jireenya barsiisummaa yeroo kan namaa hinlaanne,…..dhaloota qaruun yeroo kan fudhatu ta’ee utuu jiruu garuummoo aadaa naannoo sana jiru Oromoo hundaan ga’uuf kutatee waan ka’e fakkaata…hanga lammeessaan kan biraa nuuf lammeessutti dhangaa jalqabaasaa kana walsaamaati harkaa bubbutadhaan isiniin jedha… teessoo armaan gadiitiin barreessicha jajjabeessaa yaa Oromoo…dhaloonni barreessuurra jira!!! Bislisummaan jalqabaa sammuu bilchaatee hundaa xiinxalee hubate oomishuudha!!!!
Tags afaan Asoosama kitaaba Lammeessaa gaachisaa seenaa
Previous Rakkoo Baqattoota Oromoo keeniyaa keessatti
Next Sheek Amiin Ibroo: “Gaalli biyya Oole fakkaata”